Indlu ethe cwaka ngasechibini labucala
Kuwe ofuna ukuphumla kwingxakeko yemihla ngemihla kwaye ubuyele kwizinto ezisisiseko. I-Cottage ibekwe ecaleni kwechibi labucala elineentlanzi ezininzi. I-Cottage yenziwe ngesandla kwizigodo kwaye inesauna yesintu yaseFinland.
Ichibi linolwandle oluncinci olunesanti kunye ne-pier. Kukho isikhephe sokubheqa ongasisebenzisa xa ujonga echibini. Ekwindla kukho i-blueberries ukukhetha ngokufanelekileyo kwi-cottage. Ngexesha lasebusika siya kwenza umngxuma emkhenkceni wamanzi e-sauna kunye nokuqubha komkhenkce.
Ukuba unayo nayiphi na imibuzo zive ukhululekile ukubuza!
I-cottage inezibane ezisebenza ngelanga kunye nefriji esebenza ngegesi kunye nesitovu. Ngexesha lasehlotyeni unokwenza ukutya nakwindlwana yebarbecue enendawo yokuhlamba izitya.
Isofa ivula ibhedi ephindwe kabini kwaye kukho nendawo yokulala yabantu abayi-1-2. Iziko elihle ligcina i-cottage ifudumele. Siza kukunika onke amanzi okusela amatsha owadingayo ngokuhlala kwakho.
Iziko laseSavonranta likumgama oziikhilomitha ezi-6 ukusuka kwindlwana.
Kukho ivenkile yokutya, ikhemesti, iziko lezempilo, ivenkile yezandla kunye neendawo zokutyela ezimbalwa.
Iziko lokutyibiliza iLekotti kunye nepaki yeentambo kumgama oziikhilomitha ezili-9.
Ipaki yesizwe yaseKolovesi imi kumgama oziikhilomitha ezingama-30.
Izixeko ezikufuphi yiSavonlinna (iikhilomitha ezingama-62) kunye neJoensuu (iikhilomitha ezingama-78).
Ngexesha lasehlotyeni ungaqesha iphenyane ezimbini. I-Canoe ikumgama oziikhilomitha ezintathu ukusuka kwindlu encinci ngasechibini elikhulu. Kuya kuba luhambo oluhle losuku! Irenti yi-euro ezingama-20 kwaye ibandakanya iibhatyi ezimbini zobomi.
Ngexesha lasebusika unokuqesha iseti yokuloba ebusika ukuze usebenzise ngokufanelekileyo kwi-cottage. Isethi ibandakanya ubhaka ovula isitulo, i-auger ukwenza umngxuma emkhenkceni kunye neentonga ezininzi zokuloba kunye nezithiyelo. Yonke into oyifunayo ukuzama ithamsanqa lakho ngeentlanzi! Irenti yi-euro ezingama-20 ngokuhlala kwakho konke.
Ngexesha lasehlotyeni ungaqesha iphenyane ezimbini. I-Canoe ikumgama oziikhilomitha ezintathu ukusuka kwindlu encinci ngasechibini elikhulu. Kuya kuba luhambo oluhle losuku! Irenti…